Tun Tun's blog / Free Video Chat Conferendo
Tun Tun's blog
Išsiųsta 2012.07.04 iki
တက်သံနဲ့ရောနေတဲ့အသံသြသြ ကြီးနဲ့ထ သီချင်းဆိုရင် တစ်ယောက်က...
တစ်ယောက်က. " ကြွက်ကြီး ကျုပ်ပြင်မရလို့လောင်သွားတဲ့စက်ကို ခင်ဗျား အသံကြောင့်လောင်
အားကျမခံ ... "အောင်မယ်..ဟောဒီအနီးတစ်ဝိုက်မှာကျွန်တော့်အသံကိုမှီတဲ့သူတစ်ယောက်မှမရှိဘူး... ပိုက်လုံးပေါ်မှာညဖက်သီချင်းဆိုရင် ဈေးဆိုင်ကမစန်းကြည်တောင် ခဏခဏ
ထွက်တားရတယ်.သူ့ကလေးသိပ်မရလို့ဆိုပြီးးးး တစ်ယောက်က..ဒီနေ့ကတော့လစာရပြီ..ဟိုကောင် ah poe ဘဏ်ကိုသွားပိုက်ဆံ
ထင်တယ်နှော်..တစ်ယောက်ကပြောတော့...အာဇစ်ဆိုတဲ့ မြန်မာကုလားလေးက "မလေးမှာလုတာတော့မပြောနဲ့ ဒီကောင်တွေက ဘဏ်ကထွက်လာတဲ့သူတွေကို
ပလက်ဖေါင်းပေါ်မှာwashing mechineပြင်နေတာ လုသွားပြီ ...လုသွားပြီ..ဆိုပြီး
အဲဒါနဲ့ကြည့်လိုက်တော့လူပုံစံက ဘစ (ဘိန်းစား) ပုံဆိုတော့ ကျွန်တော်လဲ
ဗျင်းမယ်ပေါ့လေ ..လိုက်တာပေါ့ ...လိုက်ရင်းလိုက်ရင်း မိခါနီး ကျတော့
သူကတံခါးဖွင့်ထားတဲ့ကားထဲပြေးဝင်တော့ ကျွန်တော်လဲ အနားလဲရောက်ရော
..သူက သေနတ် ကိုဆွဲလဲထုတ်လိုက်ရော...ကျွန်တော် လဲဘာရမလဲ လစ်တာမှတန်းနေတာပဲ...ကျွန်တော့်နောက် ကလိုက်လာတဲ့ကောင်တွေကကျွန်တော်
Išsiųsta 2012.06.21 iki
Myanmar Cyber Defence Army
aungsansukyi@blumail.org ဟု add လာပါက လုံးဝလက်မခံပါနဲ့ ။ ၂၄ နာရီအတွင်း မိမိတို့အကောင့်များ ပျောက်ဆုံးသွားပါလိမ့်မည် ။ အမေစုဖြေပေးပါ အပိုင်း ၂ ဆိုပြီး zip ဖိုင်နဲ့ ပို့ လာတာဟာ အလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ VIRUS ပါ ။ ကွန်ပျူတာ ကို လုံးဝ ပျက်သွားစေပါတယ်.. လုံးဝ ဖွင့်မကြည့်ပါ နဲ့ ။ မှတ်ချက်။ ။ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ပြီး သတ်ဖို့အဖြေရှာ မရ နိုင်သေး ခင် ကြိုတင်သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
Išsiųsta 2012.05.31 iki
ခုတစ်လော အထူးအဆန်းတွေဖြစ်ဖြစ်နေတယ်မယုံနိုင်စရာ မြိုင်ရာဇာကြွက်ဖြူတစ်ယောက်..
တစ်နေ့သူရောက်လာပြီး " ကျွန်တော့်ကို သီချင်းတစ်ပုဒ်လောက် လုပ်ပေးစမ်းပါဗျာ
ကျွန်တော့်ကောင်မလေးကခုတစ်လော စိမ်းကားနေတယ် အတွေ့ကိုမခံဘူးဖြစ်နေတယ်၊
ကြွေသွားလောက်တဲ့သီချင်းလေးနဲ့ပေါ့" တဲ့ ။သီချင်းလုပ်တယ်ဆိုတော့ အထင်ကြီးမသွား
နဲ့ဦး.ဟီးးးးး... movie maker နဲ့ သူများဆိုပြီးသား mp3 သီချင်းလေးတွေနဲ့
ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲ ရတယ်လုပ်ပေးမယ် coke ဗူးကြီးနှစ်ပုလင်းသာဝယ်လာခဲ့
တာပေါ့။ဒါနဲ့ ဖုန်း မန်မိုရီ ကာဒ်လေးတစ်ခုနဲ့သူရောက်လာတယ်..သီချင်းကတော့
အဆိုတော်ဒီဖြိုး ရဲ့...ငါဝအောင်ငိုမယ်...ဆိုတဲ့သီချင်းနဲ့လုပ်မယ်တဲ့ ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲ
တီဗွီက စုံထောက်ကားကလည်းကောင်းနေတာဆိုတော့ စိတ်အေးလက်အေးနဲ့
ကသူတို့ကိုနတ်သမီးလေးတွေဘာညာဆိုအရမ်းကြိုက်တတ်တော့..Dream angel ပေါ့။
ပုံတွေကိုmovie maker ထဲ import လုပ်..သီချင်းလေးထည့်ပေါ့။ ခေါင်းစဉ်စာသားကို
animation ပြောင်းတာလေးတွေလုပ် ကာလာတွေလိုချင်သလိုပြောင်းပြီးစိတ်တိုင်းကျပြီ
ဒါနဲ့သီချင်းလဲပြီးရော.အင်းးးEnding title မှာတော့ ငါ့နာမည်လေးတော့ထည့်ဦး
မှ..created by tun tun kaythayarzarheart ပေါ့လေ..ဟဲဟဲ။ရပြီးသားဖိုင်က
WMV ဖိုင်ဆိုတော့ဒီဗီဒီနဲ့မဖတ်ဘူး..အဲဒီတော့onlineက ဖရီးဒေါင်းထားတဲ့converter
ဆော့ဝဲထဲထည့် video TS ဖိုင်ဖြစ်အောင်ပြောင်းပြီးမှ ခွေထဲကိုကူးထည့်ပြီးburnလိုက်
Išsiųsta 2012.04.22 iki
လည်း မိမိဘာသာစကားမဟုတ်သောကြောင့် စိတ်ထင်တိုင်း ရေးလို့မရ
ဖြစ်နေသော ညီငယ်ညီမငယ် သူငယ်ချင်းများအတွက် အကြံပြုချင်လို့ပါ။
(၁) စာရွက်အလွတ်တစ်ခု ယူပြီး အလည်တည့်တည့်တွင်မျဉ်းတစ်ကြောင်းဆွဲပြီး
ထားပါ။မျဉ်းကြောင်းရဲ့ ပထမ အခြမ်းမှာ
ဂ...........* (or) 8'( shift +8 )
ဋ..........# (or) 3'
ဍ...........! (or) 1'
ရ.........8' (or) *
စာလုံးတွေမှာ အပေါ်ကဒီလိုလေး (k')ရေးထားတာ (shift+k) လို့ဆိုလိုချင်တာပါ။
နောက် ညာဖက်အခြမ်းမှာက ဒီလိုရေးထား....
မောက်ချ..ါ......G
ယရစ်ြြ ......m'..n'
တစ်ချောင်းငင်..ု..... k..k'
နှစ်ချောင်းငင်ူ........l..l'
ရှေ့ထိုး ။.င သတ်....်...f
မေါက်ချရှေ့ထိုး. .ါ်.... : .. ( shift+; )
ယပင့်ဝဆွဲ ..ျွ....... r'
ctrl+alt +(ရိုက်လိုသည့်စာလုံး) သို့မဟုတ် shift+ctrl+alt (ရိုက်လိုသည့်စာလုံး)
gtalk ထဲမှာနှစ်ရက်လောက် chatting လုပ်လိုက်.ဒါဆိုရပြီ..
မိမိရဲ့စက်မှာmyanmar forntမရှိရင်..အောက်က လင့် မှာ
အားလုံးပဲပျော်ပျော်ရွှင် ရွှင်နဲ့ ရင်ထဲကလာတဲ့စကားလုံးတွေရေးနိုင်ကြပါစေဗျာ.....
Išsiųsta 2011.06.27 iki
လေ ။တစ်နေ့..လျှောက်သွားနေရင်း ရေချမ်းစဉ် သန့်သန့်လေးတစ်ခုတွေ့တော့သူက
" ခဏလောက်...ဦးမောနေလို့ရေလေးသောက်လိုက်ဦးမယ် " ဆိုပြီးသူကရေသောက်ပါတယ်။
ပြီတော့ မင်းရောသောက်ဦးမလားဆိုပြီး ရေခွက်ကိုပေးတော့ကျွန်တော်က လည်း ပေါက်တတ်ကရ
စဉ်းစားပြီး ရေခွက်ကိုနောက် လက်ကိုင်နှုတ်ခမ်းစပ်က သောက်လိုက်ပါတယ်။ဒါကိုသူကတွေ့တော့
" သား....မငိးဘာလို့ရေကိုအဲဒီနေရာကသောက်တာလဲဆိုပြီးမေးတော့ ကျွန်တော်ကလည်းစဉ်းစား
မိခဲ့တာလေးကိုပြန်ပြောပြတော့ သူက..ပုံပြင်မကျဘာမကျ နဲ့တစ်ခုကိုပြောပြပါတယ်..
ဟိုအရင်တုန်းက လူတစ်ယောက်ဟာ ရေသောက်မလို့လုပ်ရင်း မင်းစဉ်းစားသလိုစဉ်းစား
" အင်း.......ရေခွက်ကဒီနှုတ်ခမ်းနားဆို လူတွေအများကြီး ဒီနေရာကသောက်မှာ၊တစ်ခြားဖက် ဆိုရင်
လည်း ဘယ်သန်တွေက အဲဒီနေရာကသောက်မှာ..ရှေ့စပ်နားကဆိုလဲ အဲလိုစဉ်းစားမိတဲ့သူတွေ
ကသောက်မှာပဲ။နောက် လက်ကိုင်နားကနှုတ်ခမ်းစပ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်သူမှစဉ်းစားမိမှာမဟုတ်
ဘူး ဆိုပြီးစိတ်ချလက်ချ သောက်လိုက်တယ်တဲ့။ အဲဒီအချိန်မှာခပ် လှမ်းလှမ်းမှာ သူသတိမထားမိ
ပဲ ထိုင်နေတဲ့ အရူးတစ်ယောက်က
" ဟား ဟား ဟား ဟား........ငါ သောက်သလိုလိုက်သောက်တယ် ဟေ့"..တဲ့..
Išsiųsta 2011.05.31 iki
ဟိုအရင်ကဆိုအဲဒီအကိုတွေနဲ့ အတူနေခဲ့ကြတာပါ၊မတွေ့ရတာလဲ အတော်ပဲကြာနေပြီ။တစ်ယောက်နဲ့
လေးတွေကတော့ အရမ်းလှနေကြတော့ ဒီမှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေ ကိုယ့်နိုင်ငံ၊ကိုယ့်မြို့ကိုပြန်ကြရင်
မျက်လုံးတွေ၊အပြောအဆိုတွေကတော့ အတော်လေးရိုင်းနေပြီး အစမှာတော့သိပ်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်
လွန်ခဲ့တဲ့(၇)နှစ်လောက်က အလုပ်အတူလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ ကိုကြီးတစ်ယောက်ပြောပြတာကို ပြန်
စဉ်းစားမိပါတယ်။အဲဒီအချိန်ကကျွန်တော်ကမလေးမှာ ၂နှစ်လောက်ရှိပြီ သူက နှစ်အတော်ကြာနေပြီ
၁၀ နှစ်လောက်ဖြစ်ရောပေါ့။သူလည်းနှစ်တွေသာကြာရော တစ်ခါမှအလည်မပြန်ခဲ့ရသေးပါ။သူကအဲဒီ
အချိန်မှာခွင့်နဲ့ အလည်ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်မြန်မာပြည်မှာ နားပြီးသူပြန်လာတော့ သူပြောပြတဲ့
အကြောင်းတွေနားထောင်ရင်း ညီအစ်ကိုတွေ ရယ်လိုက်ကြရတာအူကိုနာရော..
ကစော်လေးက ငါ့ကိုရှိုးနေပါလားပေါ့။ နောက်မှ အဲဒါ ငါ့သမီးဖြစ်နေလို့ ဟ" .. တဲ့...
အားလုံပဲပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ.......... Skaityti straipsnį
Išsiųsta 2011.05.20 iki
L-မှုန်ကြီးတစ်ယောက် တကုတ်ကုတ်နဲ့အလုပ်တွေရှုပ်နေတယ်။သူဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ ဟန်းဖုန်း
တစ်လုံးနဲ့ သူကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးဆီ sms ပို့ပေးဖို့ပါ။ဒီအကြံ ကိုပေးတာကလည်း မြိုင်ရာဇာ
ကြွက်ဖြူက ပေးတာပါ။ဒါကလည်းသူနေ့စဉ်လုပ်နေကျ အလုပ်ပါ။
ကိုရီးယားခွေကလည်းကောင်းနေတော့သူသတိရတဲ့အချိန်မှာ sms ပို့ဖို့ညဉ့်နက်သွား
တာပေါ့။ဒါနဲ့ သူကတွေးတယ် ညဉ့်နက်နေရင် သူ့smsကို ကောင်မလေးဖတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး
ဒါနဲ့ပဲ မနက်ကျတော့ အလုပ်သွားချိန်ကလည်းနီးသွေားဖို့ပြင်ရဆင်ရတာတွေကလည်းရှိနေ
တော့ ညတုန်းက အသင့်ရေးထားတဲ့sms ကိုပဲ ကမန်းကတန်းပို့လိုက်တယ်။ သူအလုပ်ထဲရောက်လို့
Išsiųsta 2011.05.15 iki
မနေ့က 14.05.2011မှာ ညီငယ်တစ်ယောက် vzoမှ linking park MTV လေးတွေပို့ပေးဖို့ပြော
တဲ့အချိန်မှာ ချာတိတ်တစ်ယောက်နဲ့ကိစ္စတစ်ခုပြောနေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ် အလုပ်ထဲမှာလည်းမအား
ဖြစ်နေတာကြောင့် သတိမထားမိလိုက်ပဲ အားတဲ့အချိန်မှာကြည့်လိုက်တော့chattingလုပ်ထားတာတွေ
မတွေ့တော့ view past chatsကလည်းရှာလို့မရတာကြောင့်သူ့mailကပျောက်သွားပါတယ်။နောက်
ပြီးကျွန်တော့်မှာ linking park ရဲ့ MTV တွေလည်းမရှိပါခင်ဗျား။ဒါပေမယ့် linking park သီချင်းတွေ
mail ပျောက်သွားတဲ့ညီငယ်အပါအ၀င် သူငယ်ချင်းအားလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေဗျာ။
Išsiųsta 2011.05.04 iki
တစ်ခြားတစ်နေရာမှာ အလုပ်တွေချည်းလုပ်နေရတော့ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာရှိနေစဉ်က
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာလေသွားကန် လက်ဖက်ရည်လေး ဆမူဆာလေးနဲ့ ပေါက်စီလေးတွေတွေ့
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာပဲသွားထိုင်နေကြပါ။ဆိုင်နာမည်က ကောင်း ..။ဒီကောင် အဲဒီဆိုင်က
ကောင်မလေးကိုလိုက်ကြောင် နေတာလည်းကျွန်တော်အသိ ။ကောင်မလေးကလည်းတော်တော်လေး
လှပါသည် သူကြိုက်မယ်ဆိုလည်း ကြိုက်ချင်စရာ။
သူရောက်လာတော့ ဘယ်လိုလဲ မင်းကောင်မလေးနဲ့အခြေအနေဆိုတော့..သူက " ငါ ပြောရမယ့်အလှည့်ကို မရောက်နိုင်ဘူး။ကြည့်လိုက်ရင်တစ်ယောက်ယောက်ကအမြဲလိုက်စကား
ပြောနေတာပဲ.ဟိုနေ့ကမိုးတွေ အရမ်းရွာနေတော့ ဘယ်ကောင်မှလိုက်မယ့်သူမရှိဘူး။အင်း..ဒီနေ့
တော့ငါ့အလှည့်တော့ရောက်ပြီပေါ့ ဆိုပြီး ၀မ်းသာအားရနဲ့လိုက်သွားတာ ဟိုကလှည့်လည်းကြည့်ရော ငါလည်းဘာပြောရမှန်းမသိတော့ဘူး၊စကားလုံးရှာမရတော့ဘူး" တဲ့..အဲဒါနဲ့ကျွန်တော်က....
" ညံ့ပါ့ကွာ...ထမင်းစားပြီးပြီလားလို့ မေးလိုက်ပေါ့" ဆိုတော့ သူကရေနွေးကြမ်း သီးအောင် ရယ်တယ်လေ။
ရောက်ရောနေရာတွေ ဘာတွေယူပြီးတော့ သူက သူ့ကောင်မလေးရှိတဲ့နေရာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်
" ညီလေးရေ ကျဆိမ့် နှစ်ခွက်" ဆိုပြီးမှာလိုက်တယ်..တော်တော်လေးလဲကြာရော...
" ဂွပ် "
လက်ဖက်ရည်နှစ်ခွက်စားပွဲပေါ် ရောက်လာပါတယ်။ချပေးတဲ့သူကဖြစ်ကတတ်ဆန်း ချပေးတော့
ဘေးကိုအဖိတ်ဖိတ် အစင်စင်နဲ့ အထဲမှာတစ်ဝက်လောက်သာသာနဲ့ရောက်လာတယ်။ သိပ်တော့
ရေနွေးကြမ်းလဲလာမချပေး။အဲဒါနဲ့ ညီလေးရေ..ရေနွေးကြမ်း နဲ့မုန့်လေးပါချပေးပါဦးဆိုတော့လည်း
သကောင့်သားတွေက မသိချင်ယောင်ဆောင်နေကြသည်။ဧကန္တသူတို့အစ်မ ကိုဟိုကောင်လိုက်
တမင်လုပ်နေမှန်း သိလိုက်ပြီးတော့ နှစ်ယောက်စလုံးမကြေနပ်စွာနဲ့ ကောင်မလေးမျက်နှာကြောင့်
သည်းခံပြီး ကြိတ်မှိတ်သောက်ခဲ့ရသည်။နှစ်ယောက်လုံး တော်တော်လေးတော့ တင်းနေကြသည်။
ဒါတောင်ငွေ ရှင်းပြီးပြန်ခါနီးသကောင့်သားတွေအနားရောက်လာတော့ သူက ဘာပြောလဲဆိုတော့
" ဟေ့ကောင် ကောင်း ဆိုတာဘာလဲ ကွ" ဆိုပြီးမေးတော့ကျွန်တော်လည်း ခပ်ချဉ်ချဉ် ရှိတာနဲ့....
" ကောင်း ဆိုတာ နမ (နွားမ) ပေါ့ကွ" ဆိုပြီးခပ်တည်တည်နဲ့ပြောခဲ့တော့ သကောင့် သားတွေရှူးရှူး ရှားရှား ဖြစ်ပြီးကျန်ခဲ့လေရဲ့။ အဲဒီအချိန်ကစပြီးကျွန်တော်တို့အုပ်စုရဲ့ ပါးစပ်ဖျားမှာ "ကောင်း" လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဟာ
"နွားမ" လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဖြစ်သွား ပါတော့တယ်။
Išsiųsta 2011.04.16 iki
"ရေအလောင်းခံချင်ကြသောအမျိုးသမီးများခင်ဗျား၊ရေအလောင်းခံချင်ကြ သောအမျိုးသမီးများခင်ဗျား၊တန်းစီပြီးစောင့်နေကြပါရန်။အတင်းတိုးဝှေ့ပြီး နေရာလုမနေကြပါနဲ့လို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် ခင်ဗျား" ထိုအသံများမှာကျွန်တော်တို့ service room မှလူများ အလုပ်မအား သောကြားထဲမှ micတစ်လုံး ဖြင့်တစ်ဖက်အိမ်မှကောင်မလေးများကိုလှမ်း၍စ
စနေတယ် ဟုကျိန်ဆဲနေမည်သာ။ "ကျွန်တော် ဟိုကောင်မလေးကိုရေလောင်းချင်တယ်ဗျာ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မသိဘူး"ဟု DVDပြင်သော ဆရာသိန်းခေါ်( L-မှုန်ကြီး)မှပြောသည်။သူ့ကို
တစ်ခြားသူများက ဘကြီးမှုန်ဟုစနောက်၍ခေါ်သောကြောင့် ကျွန်တော်တို့မှ
ဘကြီးမှုန်ဆိုတာမကောင်းဘူး ခေတ်မှီသွားအောင် ရှေ့က(L)ထည့်ပြီး
L-မှုန်ကြီးဆိုတာကပိုမိုက်တယ် ဆိုပြီးစနောက်ရာက နာမည်တစ်လုံးရသွား
ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်က." နင့်လက်နဲ့ရေခွက်ကိုကိုင်၊ခြေထောက်နဲ့ကောင်မလေးရှိတဲ့နေရာ ကိုသွား ပြီတော့ဟောဒီလိုသွန်ချလိုက်" လို့ပြောတော့ "ဒါတော့သူပြောမှလားဟ၊ဟိုမှာအိမ်ထဲကမထွက်လို့ပြောနေတာ။ပြီးတော့သူ့ကို သွားလောင်းရမှာခပ်ကြောက်ကြောက်ပဲ" ဟုL-မှုန်ကြီးမှပြောတော့ ကျွန်တော်က "ဟင်းးးး......အတောင်နှစ်ဆယ်ဝတ်မင်းယောကျာင်္းကြီးလုပ်နေပြီး ဆယ့်သုံးတောင် အဲလေ.နှစ်တောင် ...လောက်တောင်မရှိတဲ့စကပ်ဝတ်ထားတဲ့မိန်မသားကိုကြောက် နေရသေးတယ်။ငါစောင့်ကြည့်ပေးမယ်" ဟုမြှောက်ပေးလိုက်သည်။ L-မှုန်ကြီးလည်းအသင့်ခတ်စရာရေခွက်ကလည်းမရှိတော့ service ခန်းထဲမှ rice cooker inner pot ကြီးနဲ့ရေကိုအသင့်ခတ်ထားတယ်။မိုးလေးကဖွဲဖွဲလေး ကျနေတော့မှုန်ကြီးမှ "တောက်.....ငါရေလောင်းမယ့်နေ့ကျမှ မိုးကလည်းရွာနေသေးတယ်" ဟု မကျေမနပ်နှင့်ပြောနေသေးသည်။နေ့လည်လောက်ရောက်တော့မှ သူကြောင် နေသောကောင်မလေးနှင့်အခြားကောင်မလေး၃ယောက် ကင်မရာရှေ့မှာပေါ် လာတော့. ကျွန်တော်မှ.... "ဟေ့....လာနေပြီဟ..လာနေပြီ"လို့သတိပေးလိုက်တော့ လှစ်ကနဲL-မှုန်ကြီးပြေး ထွက်သွားသည်။လက်ထဲမှာလည်းအသင့်ခတ်ထားသော2.6 liter inner potကြီးနှင့်။ ကျွန်တော်လည်းကင်မရာထဲမှသူ့ကိုကြည့်နေတယ်။မြင်ကွင်းထဲကပျောက်သွားပြီး သိပ်မကြာခင်... ဗုန်းးးးး.....ဂွမ်း....... ဟ..ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမသိ၊ရေလောင်းတာဒီလောက်တော့ မကြမ်းနိုင်။ကျွန်တော်လဲ အပြင်ကိုထွက်ကြည့်လိုက်တော့.သူ့ကောင်မလေးကိုမတွေ့ မှုန်ကြီးတစ်ယောက် ကောင်မလေးတွေအိမ်ရှေ့မှာဖလက်ပြ နေသည်။သူ့နောက်မှ ကောင်မလေး ၂ယောက်ကတော့ ရယ်ချင်နေတာကို အောင့်အီးနေရတဲ့ပုံပေါက်နေသည်။သိပ် မကြာခင်ရှုံ့မဲ့ညစ်ပေလျှက်..မှုန်ကြီးပြန်လာသည်။ကျွန်တော်က.. "ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဟ မှုန်ကြီးတို့ဖြစ်လိုက်ရင်သူများနဲ့ကိုမတူဘူး" ဟုပြောရာ L-မှုန်ကြီးမှ... "ဟူးးး.....ပြောမပြောချင်ပါဘူးဗျာ...ကောင်မလေးကိုရေသွားလောင်းတာ.သူ့ မလောင်းမိပဲ ချော်လဲပြီး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပြန်လောင်းမိလို့".....တဲ့ ပျော်စရာသင်္ကြန်မှာအားလုံးပဲပျော်ရွှင်ကြပါစေဗျာ....
ရယ်စရာပေါ့ပေါ့ပါးပါး Naujausi komentarai
Name of Allah, the Merciful HelloDidn't you asked your self one day :What's Th…
တကယ့် အဖြစ်အပျက်လေးပါ။ကျွန်တော်အရေးအသားမှားသွားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။အမှန်က အိမ်ကျိုးကျ ခြင်းဖြစ်ပါတယ်၊အိမ်ပြိုတာမဟုတ်ပါ ဘူးခင်ဗျား။